Chii chekuita kana iwe ukadonhedza yako iPhone mumvura? | IPhone nhau
Chii chekuita kana iwe ukadonhedza yako iPhone mumvura?
Kunyangwe runyerekupe runotaura nezvekuuya kweiyo isingadzivirire iPhone iri kutenderera zvakare, chokwadi ndechekuti isu tichiri kufanira kungwarira kana iyo iPhone yakanyorova. Iyo iPhone 6s / Plus yaisanganisira dhizaini shanduko idzo dzinopa kukurira kukuru kumvura, asi haisati yasimbiswa IPx7-8, izvo zvaizoratidza kuti inogona kushandiswa "pasina kutya" (mune zvinyorwa, nekuti zvimwe zvivimbiso hazvivhare) kupfuura yedu iPhone inowira mumvura. Asi panguva ino uye neese maPhones aburitswa parinhasi, isu tinofanirwa kungwarira.
Iyo nguva iyo yedu iPhone inowira mumvura, chinhu chekutanga chichaitika ndechekuti pachave nekutya, uye hazvishamise. Chishandiso chisina kugadzirira kunyorova chinogona kukuvara kana tikadaro, asi isu tinogona kugara tichiedza bvisa mvura kubva mukati. Pane nzira inowanzo shanda, iri iya yemupunga. Isu tinotsanangura iyi nzira uye mimwe mibvunzo pazasi.
Kana iyo njodzi isati yaitika, tinokurudzira zvakasimba kuti iwe nechero ipi yeaya mabutiro ekudzivirira yako iPhone kubva kumvura, jecha, guruva uye chero chinhu chingakanganisa icho. Muzhizha zvirinani kuva wakachengeteka pane kusuruvara mushure.
1 Usual solution kana yako iPhone yatota
2 Yangu iPhone yakanyorova uye haina kubatidza, yatyoka here
3 Yangu iPhone inoenda, asi iyo skrini haishande
4 Maitiro ekuomesa yakanyorova iPhone
4.1 Ini ndinogona kuomesa yakanyorova iPhone nehairdryer?
5 Ndingaite sei kuti ndigadzirise iyo iPhone yanyorova?
6 Kana ndikaunza yangu yakanyorova iPhone kuApple, vachaziva here?
Usual solution kana yako iPhone yatota
Sezvandambotaura, nzira inonyanya kuzivikanwa, yakapusa inowanzo shanda ndiyo mupunga nzira. Kana iPhone ikanyorova, isu tinofanirwa kuita zvinotevera:
Tinodzima chishandiso nekukurumidza sezvazvinogona. Izvo zvakakosha kuti tisatarise kana zvichishanda panguva iyoyo kana isu tisingade kutora chero njodzi dzisingakoshi.
Isu tinotora SIM kadhi.
Isu tinoomesa iyo iPhone nekapfava napkin, jira kana tauro.
Iri ndiro danho rakakosha: isu tinoisa iyo iPhone mumudziyo nemupunga. Mudziyo uyu unofanirwa kuve wakakura zvakakwana kuvhara iyo iPhone zvachose.
Nhanho inotevera ndeyekumirira kusvikira mupunga ubate chero hunyoro hungave hwapinda mu iPhone. Kunze kwekukurumidzira, hatisi kuzoshandisa iyo iPhone kusvika mushure memaawa makumi maviri nemana.
Kana zvese zvikafamba mushe, foni inofanirwa kushanda, asi ndizvo anogona kunge akatambura kukuvara uye kuti pane chimwe chinhu chisingashande sezvachinofanira kuita. Semuenzaniso, kamera inogona kurasikirwa nehunhu nekuda kweiyo lens iri kunyorova uye ichisiya zvasara, kana bhatani repamba rinogona kuenda zvakanyanya kana kuita ruzha. Asi hei, chakakosha ndechekuti haina kunyatsoshandiswa.
Panguva ino zvinoita sekukosha kutaura kuti iyi nzira inoshanda chete nemvura yakachena. Kana yedu iPhone ikawira mumvura ine munyu, maitiro aya haafanire kushanda. Munyu unokanganisa uye tsvina, saka mukati mechigadzirwa chinenge chingatokanganiswa. Tinogona kuedza nguva dzose, asi mune ino nyaya isu taifanira kuita yekupedzisira nhanho katatu uye nekuisa akati wandei makenduru patron musande wedhorobha redu.
Maitiro ekuziva kana yako iPhone kana iPod yakanganisika nezvinwiwa
Yangu iPhone yakanyorova uye haina kubatidza, yatyoka here
Chinhu chekutanga chandingakuudza ndechekuti iwe unorangarira nhanho yekutanga yenzira yapfuura. Kana tikadonhedza iPhone yedu mumvura, senge chero chimwe chigadzirwa chemagetsi, isu hatifanirwe kuedza kuibatidza. Ndinoziva zvakaoma, nekuti chinhu chekutanga chatinoda kutarisa ndechekuti chinoshanda here, asi magetsi haawirirane nemvura uye harisi zano rakanaka. Izvo zviri kutaurwa, kana yako iPhone yadonhedzwa mumvura uye isingatendeke, iwe ungangodaro wakatambura zvisingadzoreke kukuvara.
Mune ino kesi, isu tinogona kuve nerombo rakanaka uye kuti iko kukanganisa kwakangokanganisa iyo skrini, sezvatichatsanangura mune inotevera poindi
Yangu iPhone inoenda, asi iyo skrini haishande
Iwe unofanirwa kutendeseka uye utaure icho chinhu haina kutarisika. Kana iyo skrini yechishandiso inofanirwa kuvhurika isingatenderi mushure mekunyorova, pamwe chinhu chakaputswa. Chinhu chekutanga chatinogona kufunga nezvacho ndechekuti mvura yakanganisa iko kubatana kwakabatana nescreen nebhodhi reamai, izvo kanenge. Asi isu tinoziva sei kuti iyo iPhone inoshanda kana iyo skrini isingabatike? Zvakanaka, isu tinofanirwa kuzviita kurira. Kana isu tine iPhone 4S kana yepamusoro, zano rakanaka ringave rekukumbira Siri. Kana iwe ukataura nesu, tinoziva kuti iyo iPhone haina kufa zvachose. Kana isu tine iPhone yechikuru, tinogona kuve nemumwe munhu anotidana isu.
Mune ino kesi, ini Ini ndaizoenda nayo kuApple Chitoro, uko kwavaizondiudza chaizvo kuti chii chakashata nazvo uye vondipa chitauro chekuigadzirisa. Kana iwe uri wemanomano kana uchiziva mumwe munhu anogona kuzvigadzirisa, iwe unogona zvakare kuzviedza iwe pachako, sezvakatsanangurwa gare gare.
Maitiro ekuomesa yakanyorova iPhone
Zvakanakisisa zvatinogona kuita ndeizvi mupunga nzira akatsanangura pamusoro. Ini pachangu ndakazviita pane akasiyana emagetsi zvigadzirwa, senge iri kure kutonga kweTV yandinayo parutivi rwangu panguva ino, uye yagara ichindipa mhedzisiro.
Chinonyanya kukosha ndechekuti usashandise iyo kusvikira yaomazvisinei nezvatinoita kwauri. Ndinoyeuka nyaya yechokwadi yatakange tine komputa padhuze nepahwindo rakavhurwa muzhizha, mune imwe imba yatisingagare, yakatanga kunaya zvakanyanya uye patakaenda mumba kuti tione kuti zvese zvakamira sei, komputa yaive. .. sekunge angadai akadonhera mudziva rekushambira.
Ndinoyeuka mukoma wangu achindiudza kuti ndisiye uye ndinyore pasi kwechinguva. Hapana zvatakaita kwaari, chingomirira inenge vhiki. Patakarova bhatani remagetsi, komputa yakamhanya kunge yakanga isina kumbonyorova.
Ini ndinogona kuomesa yakanyorova iPhone nehairdryer?
Simba unogona, asi hazvikurudzirwe. Sezvaunenge uchitoziva, bvudzi rekuomesa rakagadzirirwa kuomesa bvudzi rako. Kana isu tichifunga nezvekuvhuvhuta mweya unopisa pairi, tichifunga kuti iwo macircuit anowanzo kuve akapusa, tinogona kupisa zvemukati zvikamu. Muchokwadi, michina yemagetsi haifanire kunge inopfuura 40º, saka kufuridza mweya unopisa uyo ungangodaro uri kutenderera 60º haisiyo pfungwa yakanakisa pasi rose.
Ichokwadi zvakare kuti tinogona kushandisa Mhepo inotonhora, hongu zvinoenderana neyakaomeswa. Mune ino kesi inogona kubuda zvakanaka, asi ndiani anotivimbisa kuti hatisi kuzofambisa mvura uye kuita kuti mamiriro acho anyanye? Zvakanakisa mune izvi kesi mupunga.
Ndingaite sei kuti ndigadzirise iyo iPhone yanyorova?
Zvine musoro, zvinoenderana. Chii chakatyoka? Mhinduro yangu yekutanga kumubvunzo uyu ingave yekuita nzira yemupunga zvakare, asi isu tinotanga pahwaro hwekuti tatozviita. Chinhu chinotevera chatinofanira kuita kutsvaga kuti chii chakashata. Kana chimwe chinhu chakatitadza, zvakanakisa zvatingaite kushanyira webhu kubvunza iyo Chinyorwa kugadzirisa iPhone iFixit uye chenesa, gadzirisa kana kutsiva chinhu chakakuvadzwa.
Semuenzaniso, kana iyo skrini ikasabatidza, tinogona kutenga imwe, shanyira iyo iPhone chikamu pane webhusaiti ye iFixit, tsvaga maitiro ekugadzirisa iyo skrini uye ita zvatinoona pawebhu. Zvinhu zviviri zvinofanirwa kutariswa: yekutanga ndeyekuti izvo zvatinoona muIFixit ibasa revanyanzvi uye rinotarisirwa kune nyanzvi kana vanhu vane ruoko rwakanaka rwekugadzirisa rudzi urwu rwechigadzirwa.
Kana isu takaomarara zvishoma, zviri nani kutikanganwa uye kumbira rubatsiro rwehunyanzvi. Chinhu chechipiri chatinofanira kufunga nezvacho ndechekuti isu tichazoda maturusi akakosha ekugadzirisa chero chishandiso cherudzi urwu, senge chakakosha screwdriver kana makapu maviri ekusveta ayo anoshanda kubvisa chinovhara pasina kuchikuvadza kana kesi.
Kana ndikaunza yangu yakanyorova iPhone kuApple, vachaziva here?
Zvingangodaro hongu. Zvigadzirwa zvemagetsi senge iyo iPhone zvine zviratidzo, mamaki kana "maputi" iyo inoshandura ruvara kana ikaona hunyoro. Nyanzvi dzinovimba nezviratidzo izvi kuti vaone kana garandi ichiri kushanda kana yakavharwa nekuda kwekushandisa zvisirizvo mudziyo nemushandisi. Tinogona kufunga kuti kana ikanyorova zvishoma havazozviona, asi tinenge takanganisa. Iko kune zvisingawanzoitika asi zvichiri zviitiko umo izvi zvinongedzo zvinoshandura ruvara kunyangwe kana mudziyo usati wanyorova, kungova munzvimbo ine hunyoro kwenguva yakareba. Icho hachisi icho chakajairika chinhu, asi icho chiitiko. Chinhu chakashata mune idzi kesi ndechekuti technician hapana chimwe chaanogona kuita kunze kwekuzivisa kuti tanyorovesa, kunyangwe tichigona kugara tichiedza kutaura nevakuru uye toona kana tichigona kumubvumidza kuti mhosva yatakaunza iPhone yedu haina yakaitika nehunyoro hunowanikwa nezviratidzo.
Chero zvazviri, inenge isiri pfungwa yakanaka ita kuti inyorove, uende nayo kuApple Store uye kureva nhema uye kuomerera nenzira yakaipa uchizviramba. Sekutaura kuri kuti, "zvinoitwa zvakanyanya nekunanzva pane kuruma" uye kana tikatonhorerwa, nyanzvi inozvidzivirira uye ichavhara chikamu ichi ichizivisa kuti iyo iPhone yatatora yatota, yarasa warandi uye , kana vakatarisira kugadzirisa, isu tichafanira kubhadhara.
Kuwana yedu iPhone nyoro haisi dhishi rinonaka kune chero munhu, kana zvirinani kunyange izvo zvinofungidzirwa kuti zvisina mvura iPhone 7. Kana ikanyorova, zviri nani kuiisa mumudziyo une mupunga kwemaawa angangoita makumi maviri nemana.
Kana mushure menguva iyoyo tikaibatidza uye ikasashanda, isu tichafanirwa kutsvaga izvo zvakatyoka. Inogona kunge iri pfungwa yakanaka kuendesa kuApple Store kuti igadziriswe, asi haisiriyo pfungwa yakanaka kunyepa ichiti hatina kumbonyorovesa nekuti "maputi" anotipa. Chero zvazvingaitika, kana yako iPhone yakanyorova, rombo rakanaka. Pamwe unoida.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Chii chekuita kana iwe ukadonhedza yako iPhone mumvura?
haha namata? Zviri nyore neakaomeswa, kana zvirinani ndizvo zvakaitika kwandiri uye zvinoshanda zvakanaka
Wakazviita sei, ndokumbira unditaurire kuti yangu haina kubatidza
Ndakawira mudziva zhizha rapfuura.
Ndakaidzima, pandakasvika kumba ndaiiisa ndichiburitsa mu microwave, ndisina simba.
Uye kusvikira nhasi
Ndiri kunetseka kuwana imwe, uye vanhu vachivabata zvisina kunaka kunze uko hehehe
Pindura kune calico
iwe wakariisa mu microwave uye zvakabuda zvakanaka, zvisingaite. Ini ndaisa nokia 9350 (handikwanise kurangarira modhi zvakanaka) kungoona zvakaitika uye nevamwe vekutaurirana nemhangura uko mini sim kadhi inoenda ikanyungudika kwemasekondi mashoma, ingori mumarara.
Kana ndikadonhedza mumvura, mushure mekuiisa mupunga ndaizoitumira kusevhisheni yakananga, yaisazobatidza.
yangu yekare t616 yakaparara mumacaribbean uye ichiri kushanda
Yangu yakawira mumvura uye hapana chakaitika, zvese zvakajairika, inoshingirira, ndakaisimudza, hafu yakaomeswa yakanzwika zvinyararire kwenguva pfupi, ndinofunga yakaomeswa uye yaive bem ... mupunga unoratidzika albur hahaha .
mumwe munhu ari kunetseka akadaro
nu ma izvozvi wangu haanzwike, zvakatora nguva yakareba sei kuti uzvinzwe?
Pindura kune mumwe munhu ane hanya
Zvakanaka, ndinokuudza kuti yangu iPhone yakawira mutabhu ine sipo uye ine chlorine mvura, uye ini ndikatevera matanho ese akaratidzirwa pano. Izvo zvakaitika kwandiri mazuva matatu apfuura uye nhasi angangoita maawa makumi mana apfuura kubva payakadzimwa uye muchitoro nebhegi remupunga. Ini ndakangoibatidza uye kuyedza zvimwe zvacho, uye zvakakwana. Ini ndichiri kuda kuyedza kamera uye odhiyo, asi sezvo bhatiri iri shoma kwazvo, ndakaisiya kuti iedze gare gare.
Ini ndakave ne Samsung uye zvakafanana zvakaitika kwandiri, panguva iyoyo nzira yemupunga yakashandawo kwandiri.
Zvakaitika kwandiri neiyo iPhone 3G gore nehafu yapfuura uye ini ndakaita chaizvo zvakafanana chinhu chaunotaura ... Kusanganisira kunamatira hongu. Uye kusvikira nhasi !!! Icho hunyengeri hunoshanda.
Zvakanaka, chinonyatsoshanda ndechekuiisa muisopropyl doro, muhombodo yakavharwa uye kuizunza kwemaminetsi mashoma, rega doro ripinde mushe ... saka hapana chinobviswa uye kusiiwa kuti chizorore. Ukasa "kurapa" nazvo, hapana chinogona kuzviita ... kwaziso
Ini ndakawirawo ... pandanga ndichiveura ndoteerera mumhanzi parunhare uye mune imwe yeizvi ndakangoerekana ndarova mvura nefuro nezvose xDDD
Akaita chimwe chinhu chisingazivikanwe kwandiri, uye ivo vakarega maspika kuti ashande kwechinguva uye akandiudza kuti chishongedzo chakabatana blablabla (kunyangwe pakanga pasina zvekuwanika pa xD) ... mushure memaawa mashoma zvese zvakashanda zvakakwana
hahahaha zvinoita kwandiri kuti anga asisakwanise kuzvinyora hahahaha xD
Ndine shamwari yangu akaiisa mumuchina wekuwachisa ndisingazvizive uye ndinofanira kugadzirisa zvese zvakanaka ndamuudza kuti aise mupunga uye parizvino anobatidza dambudziko nderekuti anondikumbira kuti ndiibatanidze itunes ndinozviita zvinodzosera asi painotangazve inoramba ichiti to connect it to itunes. Pane chero munhu anoziva kuti ndingapedze sei kuzvigadzirisa? Ndatenda
zvimwe mumwe munhu angandibatsira
Mhoro chef1986 kumagumo iwe wakakwanisa kununura iphone ... chimwe chinhu chakafanana chiri kuitika kwandiri, ndinochisanganisa nekombuta uye haatozive ... Ndoibatanidza kune simba uye mushure mechinguva inobvunza ini kuti ndibatanidze iyo iTunes ...
Foni haina kutendeuka yega ... kana yakabatana neazvino bhatiri inoratidza 90% yekuchaja ...
Ndiri padanho rekuora mwoyo ... kana iwe uchiziva zvekuita ... ini ndinganyatso kuonga ...
Ndiri kunyora kurondedzera zvangu zvakaitika neIpod Kubata kwakadonhedzwa mumvura.
Ndakaita maitiro ese aunotaura (kusanganisira munamato), uye zvese zvainge zvichifamba zvakanaka, zvinoshamisa zvakanaka. Zvese zvaive zvakanaka kwazvo, asi masvondo mashoma gare gare, kupenya kwechidzitiro kwakatanga kutadza, zvekuti kwakange kwasviba pasina poindi yechiedza. Uye zvakare, bhatiri rinowanzo gara kwemaawa maviri (kuwedzera zvishoma) uchingoteerera mimhanzi. Ngatiregei kutaura nezvekushandisa WiFi ...
Pindura kuna Hermida
Mwanakomana wangu akanda ma3gs mutoilet. Ini ndinofunga haina kusvika paminiti yakanyudzwa, ndakaburitsa sim yacho, ine bvudzi rekuomesa nemhepo inotonhorera kwemaawa anenge maviri nemazuva matatu mune tupper nemupunga. Zvishoma nezvishoma ave kupora, mushure memazuva maviri akatanga kuita zvino ndave ne80% ndapora. Ini ndinofanira kutsiva bhatani repamba,
Rimwe zuva ndichirova iphone yangu yakatora dip. Sekurairwa neshamwari, Sony technician, ndakaita zvinotevera.
- Tenga bhodhoro re ethyl alcohol mu pharmacy.
- Ini ndakanyudza foni zvachose kwe1 awa. Doro rinosiya musara kana raoma, iro rinogadzira yakachena pasina kusiya chero pfupi.
- Ndakatenga pasuru yemupunga, ndakautsemura kumusoro ndikaisa iyo 3G mukati, ndikaivhara netepi yemagetsi ndikasiya imomo kwevhiki mbiri
Zvakaoma kuisa foni mudoro, asi kunyangwe hunyengeri husingavimbise kugadzirisa, mushure mekuona zvinhu zvisinganzwisisike zvakagadzira foni mushure mekudzikinura, ndakafunga kuti yaisazondibatidza zvakare.
Hongu, vhiki mbiri dzeshungu, asi zvakashanda.
Rangarira kuti foni inorasika kana uchinge wairasa, asi kana iwe uine moyo murefu uye wobva waiomesa ZVAKANAKA, chinhu chakachengeteka ndechekuti iwe unogona kuishandisa zvakare. Kamera uye zvese.
Kana iwe uine iPhone-paperweight, nekuti yakanyorova kare, edza, iwe ucharamba uchizvidzorera,
1 awa KUSIMBIDZWA mudoro uye masvondo maviri mupaketi remupunga.
Mangwanani ano, ndadonhedza ipod inobata mutoilet, yakanyorova nenyere, ndakabva ndaiburitsa muchimbuzi, ndikaomesa netowel ndokurova bhatani rekiya, ndokuzoidzima, asi ipod haina kudaira , chidzitiro uye hapana chaigona kuitwa,
izvozvi iri mupunga.
Iwe unofunga kuti ichakwanisa kupora, uchifunga kuti ini handina kukwanisa kuidzima uye kuti yakanyorova nepee panzvimbo pemvura ???
Ndine shungu ndapota ndibatsireiwo !!!!!: Ndatenda
mmmm unoda kudya sadza rako 😉
Nhasi ndanga ndiine iPod yangu yekubata muhombodo yangu uye yakandishandura pamusoro paD: Ndakaona kunonoka ndikaramba ndichiishandisa nekuti ndaisaziva zvekuita, skrini yaive nemvura mukati, uye yaipararira zvakanyanya, zvino ndaisa iri mupunga asi aiwa ndinoziva kana ichishanda…. D: Handizive zvekuita
nooooooooooooooo iphone yangu 4 yakakuunzira !!!!!!!!!!!!!! kumirira miniti neminiti mazuva matatu aya mupunga ,,,,,,, netarisiro uye kumhanya nerombo rakanaka sedzimwe nyaya uye rombo kune vese vari mune ino mamiriro
watora here iphobe yako?
yooooooooooooooooooooo despairnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ingori mazuva matatu chete andaifunga kuti yaive vhiki
Pindura kuna katerin
Ini ndadzorera yangu iPhone 4 mazuva matatu muhari ine mupunga… ..kana ichishanda !!!!!!!!!!!
Iphone yangu yakapinda mumvura ndikasiya mwenje uchipenya, zvingave kuti inoenderera ichishanda mushure meizvi, ndakatoiisa mupunga
Pindura kuna jjohn
Zvinotyisa zvakadii, ndakakanda iphone yangu muchimbuzi ... TT chakanyanya kusimba ndechekuti inoshanda asi mutauri haashande! Chii chandingaite ??? 🙁
FUNCIOOONAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KUGONA CHOSE! NDINOFARA zvikuru PASHURE pemazuva maviri mupunga zvinhu zvese zvinoshanda zvakakwana .. Ndiri kuzoisiya 2 mamwe mazuva kuitira kana! Sara mushe
Handina kuvhura iphone mushure memazuva matatu mune mupunga nooooooooooooooooooooooo
Makadii shamwari ndine dambudziko iPhone yangu yakawira mumvura ndisati ndamboidzima, yakadzima yega kana chimwe chakadaro ndichibva ndachiomesa muma dryer ipapo mu microwave uye mushure memazuva maviri yakabatidza asi isina kupenya pachiratidziri uye maapplication haashande mmm zvandinoita?
kana wakamuisa mu microwave utaure naye ...
Mhoroi, ndinovimba mumwe munhu anogona kundiraira zvekuita ...
Inoita approx. Mwedzi miviri, yangu Iphone2 yakawira mumvura, yaive nyaya yemasekondi, asi pandakaiburitsa, iwe waigona kuona iyo skrini uye kuti yaive ichiri (kunyangwe mufananidzo wacho wanga usina kujeka). Panguva iyoyo ndakadzima nharembozha, uye mushure memaawa mashoma pazuva rimwe chetero ndakaedza kuibatidza zvakare, ichibva yadaira, asi kwemaminetsi mashoma, ndakayiibatanidza nemagetsi, ikaramba ichishanda, asi mushure mechinguva, ndakakwanisa kuona kuti pakudimbura haina kutakura chero chinhu…. Ndakaidzima ndikaverenga nezvekuisiya mumudziyo une mupunga uye / kana muhombodo uye ndichiburitsa mweya wakawanda sezvinobvira kubva mubhegi riya…. Ndakaita ZVESE zvandaigona, kunyangwe ndisina kuibatidza…. Ndinopedza vhiki, maviri, uye hapana ... Ndakaenda nayo kuna nyanzvi (iyo mumaonero angu haina kubatsira zvachose), uye akandiudza kuti ndaifanira kuichenesa uye kuomesa, pandinoenda kunofonera anondiudza kuti haana kundipa garandi kuti yaizoshanda zvakare, sezvo anga achenesa uye kunyangwe zvakadaro haina kubatidza, pakupedzisira akandiudza: «ibhatiri»…. Ndinochichinja pamberi pangu uye CHINOSHANDA…. Ndakamuudza kuti ndaizobvuma kuti aizoichinja kana iri iro dambudziko, ndakaburitsa bhatiri rake, ndikadzoreredza rangu, uye akaona kuti zvaingova izvo…. Peroooo mushure memaminetsi mashoma, YAKO bhatiri (iyo nyowani) inodzoka uye yamira kushanda 🙁…. chiratidzo cheTunes chinoonekwa pachiratidziri, uye hachirayiri, mazuva ese ndinoedza kuchibatidza asi chinoramba chakafanana…. Ini handizive zvimwe zvekuita…. Ndazvidzorera, vakandipa backup, uye hapana chinoshanda 🙁… .. Helppppp !!!!
Zvakafanana zvakaitika kwandiri neipod touch yangu, mhinduro chete yandakawana yaive yekutenga imwe
Mhoro :) Anenge maviri kana matatu mavhiki apfuura yangu Samsung Cherechedzo yakadonha pabhatiri: S React nekukurumidza, saka haina kuramba ichidarika 2 sekondi mumvura. Ndakaivhura, ndikabvisa bhatiri, ndikaoma zvakanaka (kunyangwe pakanga pasina hapana maratidziro emvura) ndokuivhara. Ini ndaisaziva hunyengeri pamusoro pemupunga uyu, uye ndaisafanira kuubatidza, saka ndakadaro. Yakavhurika uye zuva rekutanga rakashanda zvakaringana. pachiratidziro chiri pamusoro -high voltage usb iri kubatanidza kana chimwe chinhu cheiyo dhizaini ... uye mushure memaawa mashoma yakadzima (asi ikaibatidza zvakare), yakamira kushanda: (((((I sent it to repair and they Ndibvunze maeuro zana nemakumi masere nemashanu eiri) Chandinoda kubvunza ndechekuti kana mushure menguva yakareba zvakadaro muine mushonga wekusautumira kuna tecniko ... ndakaverenga chimwe chinhu nezve isopropyl doro, asi handizive kana shanda mushure memasvondo maviri: Ndokumbirawo kana mumwe munhu aitika chinhu chakadai uye pakupedzisira ndinowana foni yako, ndingafarire kana iwe ukandinyorera
Pindura kuna Nenita_DsKaro
Zvinogona kushanda nedoro iro .. huh.
Mhoro! Ndakadonhedzawo iPhone 3G. Ingoiburitsa uye nekuomesa iyo yakashanda zvakanaka. Mangwana acho skrini yaive chena uye haina kupindura kune iyo kana bhatani bhatani. Ndakaverenga peji rino ndikatevera rairo yemupunga uye ndopazviri. Usakwanise kudzima sezvavanotaura, kana ndikabvisa sim. Ndine kutenda !! chero rimwe zano ???
Haufanire kusiya foni yako muchimbuzi.
Pindura kuna cieloyvaleri
unoti chii hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
Pindura kuna belencita
Zvakanaka, yangu iPhone 5 yakawira mudziva ndikairasa ndokuiburitsa asi mushure memazuva matatu ndakaiisa mupunga ndokuisiya kwemazuva maviri uye pandakaiburitsa mupunga, haichashanduki pane yapfuura , Ndakasvika kuIusacell, kana zvekuita?
Ndatenda. kuinyika mupunga hazvishamise asi zvose zviri zviviri Ipot yangu neBlackberry zviri kushanda, ndakaoma zvakanaka mukati, ndakabvisa machips nememory kadhi ndikazvinyika mupunga kwemaawa 6. Zvinoshandaaaaa !!!!!!!
Pindura kuna Auri
Musi waNdira wekutanga ndakaenda kumahombekombe uye yangu iPhone 4s yakanyorova, ndakayanika zvakanaka uye kuyedza kuibatidza, ndoita sei?
Pindura kuna sarah1524
Mhoro kwandiri, iphone yangu yakanyarara asi yakagara muchimbuzi kweinenge hafu yeawa kana kupfuura, haina kutenderera uye yakarovera zvishoma kumberi kwepazasi chikamu uye ini ndakatoiisa mupunga hapana chimwe chinhu. ichashanda zvekare?
Pindura kune lupiz
Ndakadonhedza yangu iPhone 3G mudziva kwemaminetsi maviri aripo nekuti ndanga ndisingazive kuti ndoiburitsa sei uye hama yangu inyanzvi muzvinhu izvozvo uye anga ainayo nekapu yekukweva asi handisati ndaziva kana zvichishanda uye pazvakanyarara handina kuziva nezve sadza
Catchan kuti nezuro foni yangu yakavharwa naWalter aina Pichi ndikaiburitsa yechipiri bno ndakaburitsa bhatiri mumacards ndakaripukuta nejira ndikariisa mupunga husiku hwese bno ndinoibatidza uye inoshanda bn kukamera uye kamera haishande xc chii chandingaite?
Izvo zvinofanirwa kuitwa kuibvisa kubva mumvura uye wozoinyudza mudoro uye mushure mekuve mukati meiyo doro maitiro acho akaomesesa, zvingave zvakakodzera kuti ubatanidze nekuiisa mutangi rine kurira-kurira uye nekuchenesa zvikamu mushure mekukwirisa uye kugadzirira kushanda kuiisa muDoro kudzivirira sulphate chimwe chezvinhu zvacho nekuti sezvavano sulphated warasika
pamela gedeon de ramos akadaro
Yangu mashanu haina kubatidza, ine mazuva akati wandei mupunga uye haina kubatidza, ndinoda kuti ivheneke nekuti mukomana wangu akandipa mwedzi yakati wandei yapfuura uye ndinoda rubatsiro.
Pindura pamela gedeon de ramos
Camila gonzalez akadaro
Zvakanaka, iphone yangu 5 yave iri mupunga kwemaawa makumi maviri nemasere uye ini handishinga kuibatidza, chinhu chimwe chete chakaitika kushamwari ndokuiisa muchoto kwemaminitsi mashanu.
Pindura kuna Camila Gonzalez
roberto baysa akadaro
Zvakanaka, yangu iPhone 6 yakanyorova, ndakaiisa muhomwe yepurasitiki sezvo kwandinogara vaidira mvura uye kuti irege kunyorova, inozvizivisa ipapo asi mushure mekanguva ndakaiburitsa uye foni yakanga yakadzimwa. (yaive nemari inodarika makumi masere muzana pakubhadharisa) uye bhegi racho raive rakanyorova mukati, sezvo raive kure nepamba pangu ndaifanira kumirira maawa mashoma kuti ndikwanise kuiisa mupunga, ndakaiisa mupunga kweinenge Mazuva matatu uye pandakaona kuti haina kubatidza ndakaivhura ndikaomesa zvishoma mukati asi nanhasi haina kutendeuka ndiudze zvandingaite, handizive zvekuita kana mumwe munhu achigona kundipa mhinduro Ndingafarire rbaysa110@hotmail.com ndokumbira undinyorere kune iyo tsamba ini ndingafarire
Pindura kuna roberto baysa
Ndiri kuzokuudza zvakaitika kwandiri. Nezuro ndakakanda iPhone 6 muchimbuzi, kubva pandakaitakura muhomwe yekuseri kwebhurugwa rangu uye sezvo ndisina kumboichengeta imomo, handina kurangarira. Ndakabva ndatoritora muchimbuzi. Zvakanditorera masekondi maviri. Yakanga ichiripo. Ndakaedza kuomesa nebepa pakutanga, nekuti zvakandibata mumugwagwa uye ndaifanira kubata nepandaigona. Mushure mechinguva ndakaona kuti yanga yatodzima (kwete nekuda kwebhatiri, nekuti yanga izere, ichangobhadhariswa mangwanani iwayo). Chokwadi ndechekuti pandakachiona chakadzima pakarepo, ndakavhunduka ndokuedza kubatidza. Yakanga iri nguva yakajairika yekutya paunotanga kutamba uye kuyedza neshungu kubatidza. Nharembozha haina kubatidza. Zvakanaka, chokwadi ndechekuti ndakaenda kuCarrefour Express yaive padhuze nepandaive panguva iyoyo ndikatenga mupunga. Pakarepo nharembozha yakabatidza. Uyai, iyo skrini yakavhenekerwa uye ivo vaitaridzika semitsetse yakatwasuka. Ndichingosvika kumba ndakachiisa mutupper ine mupunga uye yanga ichingooma imomo kwemaawa angangoita makumi maviri nemasere. Zvino, mushure memaawa mashoma, nhare yakatodzimwa (ndinofungidzira kuti panguva ino ichave iri nekuda kwebhatiri). Unofunga kuti chii chakaitika kwaari? Iwe unofunga pane mhinduro here? Kutya kunondipa ndekwekuti ndakaedza kuibatidza uye handizive kana iyo iPhone yatambura diki pfupi. Kana paine paine imwe, une mhinduro here kana kugadzirisa? Uye iwe unokurudzira kuiburitsa rini mupunga? Pfungwa yangu ndeyekuedza kuona kana ichibatidza kana kuibhadharisa nekukurumidza pandinoibvisa mumupunga, nekuti mushure memaawa akawanda kudaro inofanirwa kunge yakaoma. Ndinovimba rombo rakanaka uye rinoshanda. Ndatenda!
Pindura kune lorenabernal
Mhoroi, ndakanyorova nezuro pamhenderekedzo yegungwa, ndaive nayo muchivharo chisina mweya chandisina kuvhara zvakanaka.
Pakutanga haina kubatidza kana, mushure memaawa kana ndaigona, ndakangoimisa pamusoro ndisina kubvisa SIM kana chero chinhu, ndakaedza kufona, maficha, ... zvese zvakashanda kunze kwekutanga bhatani. Mukati memaminetsi bhatiri rangu rakapera, handizive kuti nei, asi zvakandinonokera pasi nekukurumidza. Pandakasvika kumba, mushure memaawa angangoita mana, ndakaedza kuchaja, asi pakanga pasina nzira, pachiratidziri bhatiri rakabuda uye rakanga rakabatana, asi bhatiri harina kuwedzera saka handina kukwanisa kuribatidza, ndakasiya iyo husiku hwese ichichaja uye hapana.
Mangwanani ano ndangoiisa mutupper ine mupunga, regai tione kana tiine rombo rakanaka!
Chimwe chinhu chakakosha, maPhones ese ane detector yemvura, inoshanduka yakatsvuka kana ikanyorova, yangu ichiri chena, ndinovimba kana ikasandishandira ndinogona kuitora kuti igadziriswe uye iri pasi pevimbiso.
Nhanho yakanaka kune vese; P
celia lopez akadaro
Mhoroi, ini handisi kushandisa iyo inobata iD, ndichaenda nayo kuchitoro?
Pindura kuna celia lópez
Mhoroi, yangu iPhone 6 yakawira mumop bucket nemugovera manheru, haina kuzotora 3 masekondi ipapo, ndakayanika zvakanaka netowel ndichibva ndaiisa pamupunga. Nemusi weSvondo masikati, mwana wehanzvadzi yangu akaona ndiro ine mupunga, akatora nhare mbozha, ndokuibatidza, asi ndokuzodzima. Zvino, 36h mushure metsaona iyi, ndakaedza kuibatidza asi isingabatike, pane mhinduro here?
Mhoroi, yangu iPhone 6s plus yakawira muCaribbean, vakanditengesera nyaya yekuti pandisina kuvhara zvakanaka kana kukanganisa, yakadzima nekukasira, ndakaimesa nejira uyezve mupunga kwemazuva matatu asi munyu waive iwoyo mvura ndiyo yakakanganisa foni, ndakaenda nayo kuApple Store vakandiudza kuti munyu wacho wakanganisa magineti kadhi, muchidimbu, kurasikirwa zvachose kweifoni uye kutenga imwe, yakanaka kune avo vakapora
Walter Rodriguez akadaro
Ndakatota Iphone 6 yangu screen ichibuda nezvose asi dzimwe nhamba hadzishande ndinovimba kuti mupunga unobvisa Mhute
Pindura kuna Walter Rodriguez
Ko kana ndikadonhedza iPhone yangu mudziva uye yanga iriko kwemasekondi anodarika makumi maviri uye ndatoiisa mupunga ndokuisa pacharge ichibva yabatidza yodzima zvekare
Ambuya tina akadaro
Yangu yakanyarara muice cream
Pindura kuna Mbuya Tina
Yangu yakanyarara mu ice cream kweawa imwe, pandakaiburitsa haina kushanda
San Bernardino Mapurisa Mukuru Haafunge Kuvhura iPhone 5c Inobatsira Zvakanyanya
Iyo Apple Chikoro maneja webhusaiti ikozvino yave kuwanikwa mubeta